Sing२% चिन्ता अनुभव, नयाँ एकल सर्वेक्षण सर्वेक्षण अनुसार - समाचार | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण औषधि बनाम मित्र भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कल्याण घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी खेलहरु समुदाय कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी समाचार समाचार, कल्याण स्वास्थ्य
मुख्य >> समाचार >> Sing२% चिन्ता अनुभव, नयाँ एकल सर्वेक्षण सर्वेक्षण अनुसार
Sing२% चिन्ता अनुभव, नयाँ एकल सर्वेक्षण सर्वेक्षण अनुसार
चिन्ता आजको वर्तमान घटनाहरूको बुझ्ने साइड इफेक्ट हो। कोरोनाभाइरस महामारी, सामाजिक न्याय मुद्दाहरू, र आउँदो राष्ट्रपति चुनावको बीचमा, यो चिन्ता बढेको कुरा अनुमान गर्न टाढा छैन। सिंगलकेयरले आज अमेरिकामा चिन्ताको बारेमा बढि जान्नको लागि २,००० मानिस सर्वेक्षण गरे। यी खोजहरूले देखाउँदछ कि चिन्ताको दर अमेरिकाको तुलनामा बढ्दो छ अघिल्लो चिन्ता तथ्या .्क , विशेष गरी २०० c-२००3 को बारम्बार उद्धृत राष्ट्रीय राष्ट्रिय सर्वेक्षण सर्वेक्षण प्रतिकृति (NCS-R)।
हाम्रो खोजहरूको सारांश:
%२% चिन्ताको केही डिग्री अनुभव गर्दछ।
लगभग आधा उत्तरदाताहरू नियमित रूपमा चिन्ता महसुस गर्दछन्।
सामान्यीकृत चिन्ता विकार चिन्ताको विकारको सबैभन्दा सामान्य प्रकार हो।
पुरुषहरूमा भन्दा महिलाहरूमा चिन्ता बढी देखिन्छ।
निदानको औसत उमेर २ and र years 35 वर्ष बीचको हुन्छ।
अल्पसंख्यक समूहहरूको लागि चिन्ता निदानको दर कम छ।
घरमा तनाव चिन्ताको मुख्य कारण हो।
निद्रा, सम्बन्ध, र शारीरिक स्वास्थ्य चिन्ता द्वारा सबै भन्दा बढी प्रभावित छन्।
चिन्ताका साथ उत्तरदाताहरूको% 75% को पनि सह-हुने स्वास्थ्य स्थिति छ।
Respond 55-6464 बृद्धि उमेरका उत्तरदाताहरू COVID-19 महामारीको बारेमा कम चिन्तित छन्।
चिन्ताको उपचारमा पहुँच गर्न वित्तीय लागत नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो।
%२% चिन्ताको केही डिग्री अनुभव गर्दछ
हाम्रो खोजले चिन्ताको क्लिनिकल निदानमा वृद्धि देखाउँदछ २००१-२००3 NCS-R । हाम्रो सर्वेक्षणले २०२० मा २१% उत्तरदातालाई चिन्ता निदान भयो भने २०० have -२००3 मा एनसीएस-आरमा समावेश अमेरिकाका वयस्क मध्ये १%% लाई कुनै चिन्ता विकार भएको थियो। हामीले यो पनि पत्ता लगायौं कि अमेरिकामा बहुसंख्यक उत्तरदाताहरू (anxiety२%) केही हदसम्म चिन्ता गर्छन् कि उनीहरूसँग निदान छ कि छैन।
उत्तरदाताहरूको २१% नै चिन्ताले क्लिनिक नैदान गरिएको छ।
२१% उत्तरदाताहरु लाई चिन्ता डिसअर्डर हुँदैन तर कहिले काहिं कहिले पनि चिन्ताको अनुभव हुन्छ।
उत्तरदाताहरूको २०% विश्वास छ कि तिनीहरूसँग चिन्ता छ तर चिकित्सकीय निदान गरिएको छैन।
उत्तरदाताको% 38% ले चिन्ता अनुभव गर्दैनन्।
लगभग आधा उत्तरदाताहरू नियमित रूपमा चिन्ता महसुस गर्दछन्
लगभग आधा (% 47%) सर्वेक्षण उत्तरदाताहरूले केहि डिग्री चिन्ताको साथ यसलाई नियमित आधारमा अनुभव गर्दछन्। धेरै जसो (% 75%) ले पछिल्ला months महिनामा चिन्ता भोगेका छन्।
methylphenidate ritalin र adderall को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ
उत्तरदाताहरूको जसले केही हदसम्म चिन्ता देखा परे:
Anxiety 47% उत्तरदाताहरू जसले चिन्ता अनुभव गर्छन् यसलाई नियमित रूपमा अनुभव गर्दछन्।
२%% उत्तरदाताहरू जसले चिन्ता अनुभव गरे पछिल्ला months महिना भित्रमा यसको अनुभव गरेका छन्।
Anxiety% उत्तरदाता जसले चिन्ता अनुभव गर्छन् विगत बर्षमा यसको अनुभव गरेका छन्।
Anxiety% उत्तरदायीहरू जसले चिन्ता अनुभव गर्छन् त्यसले यो अनुभव एकदेखि दुई वर्ष अघि गरेको थियो।
Anxiety% उत्तरदायीहरू जसले चिन्ता अनुभव गर्दछ त्यसले यो अनुभव तीनदेखि पाँच बर्ष अघि गरेको थियो।
Anxiety% उत्तरदायीहरू जसले चिन्ता अनुभव गर्छन् त्यसले यो अनुभव पाँच बर्ष भन्दा बढी पहिले गरेको थियो।
सामान्यीकृत चिन्ता विकार चिन्ताको विकारको सबैभन्दा सामान्य प्रकार हो
NCS-R अनुसार, विशिष्ट फोबियस २०० common-२००3 को बीचमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा १ करोड भन्दा बढि वयस्कहरूलाई असर गर्ने सबैभन्दा सामान्य चिन्ता विकार थियो। विशिष्ट फोबिया भनेको एक खास वस्तु वा स्थितिको गहन, अव्यावसायिक डर हो जुन आवाश्यक व्यवहारको कारण गर्दछ। यद्यपि हाम्रो सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि सबैभन्दा सामान्य चिन्ता विकार सामान्य चिन्ता डिसअर्डर (GAD) हो, एक विकार जुन NCS-R भन्दा कममा जिम्मेवार छ। %% २००१-२००3 मा अमेरिकाका वयस्कहरूको। GAD चिन्ता वा चिन्ताको निरन्तर, निरन्तर चलिरहेको भावनाबाट चिनिन्छ जुन प्राय: अव्यवस्थित हुन्छ।
%०% को सामान्य चिन्ता विकार छ।
%%% सँग मिश्रित चिन्ता र डिप्रेशन डिसअर्डर छ।
%२% को सामाजिक फोबिया वा सामाजिक चिन्ता विकार छ।
२%% सँगaछ आतंक विकार ।
२१% सँग पोस्ट-ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर ( PTSD )।
१%% मा जुनूनी-बाध्यकारी डिसआर्डर छ ( OCD )।
%% सँग चिन्ता डिसअर्डर निदान हुँदैन।
%% का अन्य प्रकारका चिन्ताका विकारहरू हुन्छन् जस्तै विशिष्ट फोबियस, बिछोड चिंता, आदि।
सबै अमेरिकीहरूको सन्दर्भमा:
%१% ले सामान्यीकृत चिन्ता विकार छ।
२%% सँग मिश्रित चिन्ता र डिप्रेशन डिसअर्डर छ।
२०% को सामाजिक फोबिया वा सामाजिक चिन्ता विकार छ।
१%% को एक पैनिक डिसअर्डर छ।
१%% को पोस्ट-ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (PTSD)।
%% मा जुनूनी-बाध्यकारी डिसआर्डर छ (OCD)।
चिन्ताहरू पुरुषहरूमा भन्दा महिलाहरूमा बढी देखिन्छ
हाम्रो सर्वेक्षण विगतका अध्ययनहरूको साथ मिलाइएको छ कि चिन्ता विकारहरू पुरुषमा भन्दा महिलामा प्रायः देखा पर्छन्। हाम्रो सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि चिन्ता निदान बढ्दो छ, हाम्रो सर्वेक्षणले महिला उत्तरदाताहरुमा higher% उच्च चिन्ता र एनसीएस-आर भन्दा पुरुष उत्तरदाताहरुमा १% उच्च दर भेट्टायो। को NCS-R २०० adults-२००3 मा २ adults% महिला वयस्क र १%% पुरुष वयस्कमा चिन्ता डिसअर्डर रहेको पाए। जहाँसम्म, हाम्रो सर्वेक्षणले पत्ता लगायो कि २०२० मा २ respond% महिला उत्तरदाताहरू र १ respond% पुरूषलाई चिन्ता विकारको पहिचान गरिएको छ। हामीले यो पनि पत्ता लगायौं कि of२% महिला र 39%% पुरुषहरू नियमित आधारमा केही हदसम्म चिन्ताको अनुभव गर्दछन्। ।
महिला बनाम पुरुषहरूमा चिन्ता रिपोर्ट गरियो
क्लिनिक चिन्ताको साथ निदान गरियो २%% पन्ध्र%
नियमित आधारमा चिन्ताको अनुभव गर्नुहोस् %२% %%%
एक आतंक आक्रमण भएको छ % 78% %१%
थप रूपमा, सर्वेक्षण उत्तरदाताहरू बीच चिन्ताका लक्षणहरू पुरुषहरूमा भन्दा चाँडो महिलाहरूमा प्रस्तुत गरिन्छ। In मध्ये एक महिलाले चिन्ताका लक्षणहरू बाल्यकालमा शुरु हुने रिपोर्ट गरे (to देखि १२ वर्ष पुरानो) जबकि पुरुषहरूमा वयस्क अवस्थामा लक्षणहरू प्रायः देखिने गर्दछन्।
त्यहाँ प्रतिक्रियाकर्ताहरूले विश्वास गर्ने पुरुष र महिलाहरू बीचको चिन्ताको कारणमा पनि भिन्नताहरू छन्। उदाहरण को लागी, महिलाहरु भन्दा दुई गुणा धेरै पुरुषहरु चिन्तालाई औषधीको साइड इफेक्टको रूपमा विश्वास गर्थे। वित्तीय सुरक्षा र कार्यस्थल तनाव मा पनि महिलाहरु भन्दा पुरुषहरु मा चिन्ता को अधिक सामान्य रिपोर्ट गरिएको थियो। अर्कोतर्फ, ट्रामा र आनुवंशिकी पुरुषहरूमा भन्दा महिलाहरूमा चिन्ताको अधिक कारणहरू थिए।
महिला बनाम पुरुषहरूमा चिन्ताको कारण रिपोर्ट गरियो
आघात %०% १%%
जेनेटिक्स / पारिवारिक इतिहास २%% १%%
औषधीको साइड इफेक्ट %% %%
कार्यस्थल तनाव २%% 4%
चिन्ताले नर र महिलालाई फरक किसिमले पनि असर गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, चिन्ताका साथ पुरुषहरु भन्दा बढी महिलाहरु पुरुष भन्दा अधिक उदासीन लक्षण र टाउको दुख्ने / माइग्रेन रिपोर्ट। यसैबीच, चिन्ताले ग्रस्त पुरुषहरूले महिला भन्दा निद्रामा बढी समस्या देखायो।
महिला बनाम पुरुषहरूमा चिन्ताको Comorbidities
डिप्रेसन % 53% % 43%
टाउको दुख्ने / माइग्रेन %०% १%%
निद्रा विकार २.%% %१%
पुरुष र महिलाहरूले पनि चिन्तालाई फरक तरिकाले सामना गर्छन्। पुरुषहरू भन्दा बढी महिलाहरूले कम मदिरापान गरेको, खानपान, व्यायाम, र चिन्ताको अनुभव गर्दा कम सामाजिककरण रिपोर्ट गरे।
महिला बनाम पुरुषहरूमा चिन्ताको जटिल रिपोर्टि cop गरिएको
चिन्ताको अनुभव गर्ने बानी महिलाहरु Ills
धेरै रक्सी पिउनुहोस् १%% एक्काइस%
थोरै खाऊ २.%% १%%
कम व्यायाम गर्नुहोस् %०% %०%
कम सामाजिककरण गर्नुहोस् %%% %१%
सम्बन्धित: पुरुषहरूमा चिन्ता कसरी पहिचान गर्ने
निदानको औसत उमेर २ and र years 35 वर्ष बीचको हुन्छ
द्वारा एक सर्वेक्षण अमेरिकी मनोचिकित्सक संघ २०१ 2017 मा भेटिए कि हजारौं वर्ष (२ 24- to 39 year-बर्ष उमेरका आजका) सबैभन्दा चिन्तित पीढी हुन्।हाम्रो सर्वेक्षण यस बान्कीसँग सम्बद्ध छ किनकि १ higher देखि 35 35 बर्ष उमेरका बीच धेरै उमेरका सहभागीहरूको तुलनामा चिन्ताको स्तर उच्च स्तरमा फेला परेको थियो। उत्तरदाताहरूको एक तिहाइले रिपोर्ट गरे कि उनीहरूको चिन्ताका लक्षणहरू १ 13 र १ ages बीच उमेरका बीच सुरु भयो। १ 18-२ 24-२ aged बर्ष उमेरका उत्तरदाताहरूले चिन्ताका लक्षणहरू अनुभव गर्ने बढी सम्भावना थियो तर एक निदान डिसअर्डर नभएकोमा २ 25- to 34 बीचमा सामान्य नै निदान भयो। -Year-olds। Survey results बर्ष भन्दा माथिका प्रायः मध्यम आयु वर्गका वयस्कहरू र उत्तरदाताहरूले हाम्रो सर्वेक्षण परिणामहरूको आधारमा कुनै चिन्तालाई थोरै रिपोर्ट गरे।
हाम्रो सर्वेक्षणमा आधारित:
उत्तरदाताहरूको एक तिहाई (% 33%) ले रिपोर्ट गरे कि उनीहरूको चिन्ताका लक्षणहरू १ 13 र १ ages बीचमा शुरू भयो।
१ - ते २ 24 वर्षका बच्चाहरूको एक तिहाइ (% 34%) विश्वास छ कि तिनीहरूसँग चिन्ता छ तर निदान गरिएको छैन।
चिन्ताको एउटा क्लिनिकल निदानका साथ उत्तरदाताहरू मध्ये २ 28% २ 25 देखि years 34 वर्ष उमेरका छन्। यस उमेर समूहका लगभग %०% उत्तरदाताहरूले नियमित रूपमा चिन्ताको अनुभव गर्छन्।
55 55 देखि years 64 वर्ष पुरानो वयस्क उत्तरदाताहरूको respond-प्रतिशत र + 65++ उमेरका वरिष्ठ उत्तरदाताहरूले having। प्रतिशत चिन्ता नभएको रिपोर्ट गरे।
केवल%% उत्तरदाताहरूले रिपोर्ट गरे कि उनीहरूको चिन्ताका लक्षणहरू age 65 वर्षको उमेरमा शुरू भयो, र १ 13% वरिष्ठ मात्रले चिन्ताको निदान रिपोर्ट गरे।
नोट: केवल वयस्कहरू (१++ उमेर) हाम्रो चिन्ता सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको थियो।
अल्पसंख्यक समूहहरूको लागि चिन्ता निदानको दर कम छ
२०१० मा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार, सेतो अमेरिकीहरू सामान्यतया चिन्ता विकार, सामाजिक चिन्ता विकार, र आतंक डिसअर्डरको मापदण्ड पूरा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। नर्भस र मानसिक रोगको जर्नल । अध्ययनमा, अफ्रिकी अमेरिकीहरू प्राय: पोस्ट-ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरको लागि मापदण्ड पूरा गर्दछन्। एशियाली अमेरिकीहरूसँग अन्य जातिहरूको तुलनामा लगातार चिन्ताका विकारहरू कम दरहरू थिए।
हाम्रो सर्वेक्षणबाट निम्न परिणामहरू यस बान्कीसँग पign्क्तिबद्ध:
एक चौथाई (२%%) गोरा अमेरिकीहरू क्लिनिक चिन्ताले ग्रस्त छन्। थप १%% विश्वास गर्छन् उनीहरूलाई चिन्ता छ तर निदान गरिएको छैन।
लगभग प्रत्येक अल्पसंख्यक समूहको एक चौथाई - कालो अमेरिकीहरू (२%%), एशियाई-अमेरिकीहरू (२ 27%), र हिस्पैनिक अमेरिकीहरू (२%%) - उनीहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूलाई चिन्ता छ तर निदान गरिएको छैन।
यद्यपि, अल्पसंख्यक समूहहरूको लागि निदानको दर कम छ। केवल १ 13% कालो अमेरिकीहरू र%% एशियाई-अमेरिकीहरूले निदान प्राप्त गरेका छन्।
अमेरिकामा चिन्ताको मुख्य कारण घरमा तनाव रहेको छ
आनुवंशिक र वातावरणीय जोखिम कारकहरूको संयोजनले चिन्ता निम्त्याउँछ। आनुवंशिक कारकहरूमा चिन्ताको पारिवारिक इतिहास, कम उमेरमा देखाइएको लजालु व्यक्तित्वको लक्षण, वा शारीरिक रोग समावेश हुन सक्छ। वातावरणीय कारकहरु मा एक दर्दनाक घटना जोखिम शामिल हुन सक्छ।
उत्तरदाताको% 48% घरमा चिन्ताले फिक्री निम्त्याउँछ।
%२% कम आत्म-सम्मानले चिन्ताको कारण देखायो। १ self-२। बर्ष उमेरका उत्तरदाताहरूमा कम आत्मसम्मान सबैभन्दा बढी लोकप्रिय (% 46%) थियो।
%०% रिपोर्ट कार्यस्थलको चिन्ताले चिन्ता निम्त्याउँछ। लगभग आधा (% 46%) उत्तरदायीहरू जसले विश्वास गर्छन् कि कार्यस्थल तनावले उनीहरूको चिन्तालाई पूर्ण-समय काम गरेको थियो। काम गर्ने ठाउँमा तनाव पनि बढ्छ जसरी तलब बढ्छ। उदाहरण को लागी, कार्यस्थल चिन्ताको अनुभव गर्ने ents 57% उत्तरदायीले make २$,००० - ,000००,००० प्रति वर्ष make २,००० भन्दा कम कमाउने २२% लाई तुलना गर्छन्।
%०% कथित रूपमा विश्वास गर्दछ कि एक सह-मानसिक मानसिक रोगले उनीहरूको चिन्ता निम्त्याउँछ। उदासीनता सबैभन्दा सामान्य सह-हुने मानसिक विकृति हो उत्तरदाताहरूको बीचमा जसले चिन्ता अनुभव गर्यो।
२%% रिपोर्ट वित्तीय सुरक्षाले चिन्ता निम्त्याउँछ।
२%% COVID-१ p महामारीको रिपोर्टले चिन्ता निम्त्याउँछ।
२%% रिपोर्ट आघातले चिन्ता निम्त्याउँछ।
२%% ले चिन्ताको पारिवारिक इतिहास रिपोर्ट गरे।
१%% रिपोर्ट एक अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति चिन्ता पैदा गर्दछ।
१२% रिपोर्ट सामाजिक न्याय मुद्दाहरु चिन्ता को कारण। सामाजिक न्याय मुद्दाहरूमा विश्वास गर्ने २०% उत्तरदाताहरू उनीहरूको चिन्ताका कारण विद्यार्थीहरू थिए।
9% चिन्ताको अन्य कारणहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्, जस्तै रासायनिक असंतुलन, स्वास्थ्य चिन्ता, र सम्बन्धहरू।
%% रिपोर्ट चिन्ता औषधीको एक साइड इफेक्ट हो।
%% रिपोर्ट पदार्थको प्रयोगले चिन्ता निम्त्याउँछ।
निद्रा, सम्बन्ध, र शारीरिक स्वास्थ्य चिन्ता द्वारा सबै भन्दा बढी प्रभावित छन्
व्याकुलताको प्रकारको आधारमा दैनिक जीवनको तालिकालाई चिन्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, पनिक डिसअर्डर भएका व्यक्तिहरूले नकारात्मक शारीरिक लक्षणहरूमा वृद्धि हुनबाट जोगाउन व्यायाम वा यौन सम्पर्क राख्न रोक्न सक्दछ; एगोराफोबिया भएका व्यक्तिहरूले मल, भीड, गाडी हाँक्ने वा उडानबाट बच्न सक्दछन् - कुनै पनि अवस्था जहाँ उनीहरूसँग आतंकित लक्षणहरू हुन सक्छ र भाग्नको लागि वा मद्दत लिन सक्षम हुँदैनन्, भन्छन् जिल Stoddard ,पीएच.डी., स्यान डिएगो मा आधारित मनोवैज्ञानिक।
baclofen एक औषधि परीक्षण मा देखाउनेछ
%१% रिपोर्ट गर्नुहोस् कि उनीहरूको चिन्ताले उनीहरूको निद्राको क्षमतालाई असर गर्छ; % 47% रिपोर्ट गर्छन् उनीहरू कम निदाउँछन् जब उनीहरूले चिन्ता अनुभव गर्छन्।
%२% रिपोर्ट गर्नुहोस् कि उनीहरूको चिन्ताले उनीहरूको सम्बन्धहरूलाई असर गर्छ; % 56% रिपोर्ट तिनीहरूले कम सामाजिकता जब तिनीहरूले चिन्ता अनुभव।
%०% रिपोर्ट गर्नुहोस् कि उनीहरूको चिन्ताले उनीहरूको शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ; % 36% रिपोर्ट तिनीहरूले कम व्यायाम जब तिनीहरूले चिन्ता अनुभव।
% That% रिपोर्ट गर्नुहोस् कि उनीहरूको चिन्ताले उनीहरूको स्कूल वा कार्यस्थलको प्रदर्शनमा असर गर्छ; Of 67% विद्यार्थी रिपोर्ट गर्छन् कि चिन्ताले उनीहरूको स्कूलको प्रदर्शनलाई असर गर्छ।
%२% रिपोर्ट गर्नुहोस् कि तिनीहरूको चिन्ताले भोक परिवर्तनलाई असर गर्दछ; % 33% रिपोर्ट तिनीहरूले अधिक खाने जब तिनीहरू चिन्ता अनुभव।
२%% रिपोर्ट गर्नुहोस् कि उनीहरूको चिन्ताले उनीहरूको जीवनको समग्र गुणलाई असर गर्छ।
१२% रिपोर्ट गर्नुहोस् कि उनीहरूको चिन्ताले पदार्थ प्रयोग / दुरुपयोगलाई असर गर्छ; यद्यपि, अधिकांश उत्तरदाताहरूले अवैध ड्रग्स कम प्रयोग गर्छन् (% 53%), कम रक्सी पिउँछ (.2 38.२%), र कम धूम्रपान गर्दछ (% 46%) जब तिनीहरूले चिन्ता महसुस गर्दछन्।
%% रिपोर्ट गर्दछ कि चिन्ताले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई असर गर्दैन।
%% उत्तरदाताहरूले चिन्ताका अन्य प्रभावहरू रिपोर्ट गर्छन्, ड्राइभिंग, सार्वजनिक अवसरहरू, र चिकित्सा उपचार प्राप्त सहित।
चिन्ता भएका उत्तरदाताहरूको% 75% को सह-हुने स्वास्थ्य स्थिति छ
चिन्ता अनुभव गर्नेहरूसँग प्रायः सह-हुने मानसिक वा शारीरिक रोग हुन्छ (जसलाई कॉमोरबिडिटी भनिन्छ), जसले चिन्ताका लक्षणहरूलाई हटाउन गाह्रो बनाउँदछ। उदासीनता सबैभन्दा सामान्य मानसिक स्वास्थ्य अवस्था हो जुन चिन्ताको साथ हुने गर्दछ । उदासीनता र चिन्ताको उच्च सह-दर दर महिलाहरू (% 53%) र २-- to 34 देखि-34 बर्ष-उमेर (% 55%) बीचमा हो। तल सबै सह-हुने स्थितिहरू छन् जुन हाम्रो सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले चिन्ता सहितका छन्।
%%% डिप्रेसन रिपोर्ट गरियो
२%% ले निद्रा विकार रिपोर्ट गर्नुभयो
२%% टाउको दुख्ने / माइग्रेन रिपोर्ट गरियो
२०% पुरानो दुखाई रिपोर्ट गरियो
११% ले गम्भीर, दीर्घकालीन, वा टर्मिनल बिरामी (मधुमेह, गठिया, क्यान्सर, आदि) रिपोर्ट गरे।
१०% ईरिटिजियल बोवेल सिन्ड्रोम (IBS) रिपोर्ट गरियो
%% ले एक खाने विकारको रिपोर्ट गरे
%% स्वास्थ्य चिंता (hypochondria) रिपोर्ट गरियो
%% रिपोर्ट गरिएको ध्यान घाटा hyperactivity डिसअर्डर (ADHD)
%% फाइब्रोमाइल्जिया रिपोर्ट गरियो
%% पदार्थ दुरुपयोग विकार रिपोर्ट
%% ले अन्य स्वास्थ्य सर्तहरू रिपोर्ट गरे, जस्तै स्वत: प्रतिरक्षा रोग, द्विध्रुवी विकार, र बहु ​​स्क्लेरोसिस
%% होर्डिंग डिसअर्डर रिपोर्ट गरियो
२% स्किजोफ्रेनिया रिपोर्ट गरियो
२%% ले चिन्ताको साथ सह-हुने स्वास्थ्य अवस्थाको रिपोर्ट गरेन
Respond 55-6464 बृद्धि उमेरका उत्तरदाताहरू COVID-19 महामारीको बारेमा कम चिन्तित छन्
COVID-19 महामारीले तनाव र चिन्ताको स्तर बढेको छ। हाम्रो कोरोनाभाइरस सर्वेक्षण मार्च २०२० मा पत्ता लगाए कि उत्तरदाताहरू मध्ये आधा (%०%) नयाँ सामाजिक दूरी निर्देशनहरूले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने चिन्तित थिए। लकडाउनहरूको सुरूवातमा, उत्तरदाताहरूको २%% ले पहिले नै एक्लो महसुस गरे, १%% ले बढी चिन्तित महसुस गरे, र १%% ले बढी उदास महसुस गरे।
मार्च पछि, यी संख्याहरु बढेको छ। अगस्त २०२० मा गरिएको हाम्रो चिन्ता सर्वेक्षणमा, हामीले निम्न s हौंटाटिस्टिक्स:
% 43% ले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा बढि चिन्तित छन्।
% 35% रिपोर्ट छ कि संगरोध तिनीहरूको चिन्ता बढाएको छ।
२%% रिपोर्ट गर्नुहोस् कि सामाजिक दूरीले उनीहरूको चिन्ता बढाएको छ।
यद्यपि सबैजनाले कोरोनाभाइरस महामारीको बारेमा चिन्तित भएको रिपोर्ट गरेका छैनन्।
क्वारेन्टाइन कथित छ कम भयो to 35 देखि aged 44 वर्षका उत्तरदाताहरूको दशौं (%%) मा चिन्ता।
यद्यपि 65 65 वर्ष उमेरका बुढापाकालाई कोरोनाभाइरस जटिलताको उच्च जोखिम मानिन्छ, 31१% ले भने कि महामारीले उनीहरूको चिन्तालाई असर गरेको छैन र १%% रिपोर्ट गर्यो कि उनीहरूको स्वास्थ्य चिन्ता परिवर्तन भएको छैन।
28 55 देखि aged 64 बर्षका उत्तरदाताहरूको अतिरिक्त २ additional% ले यो पनि रिपोर्ट ग .्यो कि महामारीले उनीहरूको चिन्तालाई असर गरेको छैन। करीव एक चौथाई (२१%) ले चिन्ताका लागि सामान्यतया स्वस्थ कपी मेकानिजम प्रयोग गरेर रिपोर्ट ग .्यो।
महिला (२०%) भन्दा बढी पुरुष (२%%) ले महामारीले उनीहरूको चिन्तालाई असर गरेको बताएन।
चिन्ताको उपचारमा पहुँच गर्न वित्तीय लागत नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो
चिन्ताका विकारहरू अत्यधिक उपचार योग्य छन्, यद्यपि पीडितहरू मध्ये 36 36.।% मात्र उपचार प्राप्त गर्छन्, भन्छन् सनम हफीज ,Psy.D., न्यूयोर्क शहर मा एक neuropsychologist र कोलम्बिया विश्वविद्यालय मा संकाय सदस्य। यद्यपि हाम्रो सर्वेक्षणले पत्ता लगाए कि धेरै व्यक्तिहरू चिन्ताको लागि उपचार खोज्दैछन्, किनकि चिन्ता भएका respond 47% व्यक्तिहरूले चिन्ताको लागि औषधी वा उपचारको प्रयोगको रिपोर्ट गरे। हामीले मानिसहरूलाई उपचार खोज्नबाट रोक्न सक्ने सम्भावित अवरोधहरूको बारेमा ध्यान दियौं र सर्वेक्षणमा भाग लिनेहरूमध्ये औषधि वा थेरापीको लागत सबैभन्दा ठूलो बोझ थियो।
२%% चिकित्सा र / वा औषधिको आर्थिक लागत रिपोर्ट चिंताको उपचार गर्न सबैभन्दा ठूलो बाधा हो।
२%% रिपोर्ट गर्नुहोस् उनीहरूलाई चिन्ता उपचारको आवश्यकता पर्दैन।
२%% रिपोर्ट गर्नुहोस् तिनीहरूसँग उपचार गर्न कुनै बाधा छैन।
१%% रिपोर्ट छ उनीहरूलाई थाहा छैन तिनीहरूका स्रोतहरू वा विकल्पहरू के के हुन्। जो मानिसहरु लाई चिन्ता छ भन्ने विश्वास गर्छन् तर क्लिनिक निदान गरिएको छैन उनीहरुको स्रोत वा विकल्प के हो थाहा छैन।
१%% भन्छन् सामाजिक मानसिक कलंकका वरिपरि सामाजिक कलंकले तिनीहरूलाई मद्दत लिनबाट रोक्दछ। सामाजिक कलंकहरूले २२ - १ 18-२ 24 वर्षका बच्चाहरूलाई मद्दत लिनबाट रोक्दछ।
१२% उपचार केन्द्रको स्थिति असुविधाजनक हो रिपोर्ट गर्नुहोस्।
१०% रिपोर्ट गर्नुहोस् उनीहरूको बीमा चिन्ता उपचारलाई कभर गर्दैन।
%% अन्य अवरोधहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्, जस्तै COVID-१ p महामारी। उदाहरणका लागि, १ to देखि २ aged वर्षका युवाहरूले १ people देखि २ to वर्षका युवाहरूले आफ्नो चिकित्सक वा मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायलाई महामारीको समयमा कम देखेका छन् र%% ले उनीहरूको चिन्ताको औषधी पूर्ण रूपमा बन्द गर्न छोडेका छन्।
थप रूपमा, चिन्ताका लागि उपचार प्राप्त गर्नेहरूको लागि, केवल १२% रिपोर्ट गर्दछन् उनीहरूको उपचार एकदम प्रभावकारी छ, यसको मतलब यसले पूर्ण वा लगभग पूर्ण रूपमा चिन्ता कम गर्दछ। अठ्ठाइस प्रतिशत रिपोर्ट उनको उपचार हल्का प्रभावकारी छ र%% रिपोर्ट उनको उपचार प्रभावकारी छैन। बहुमत (% 53%) कुनै पनि औषधि वा थेरापी प्रयोग गर्दैन।
एकलकेयरले यो चिन्ता सर्वेक्षण Y अगस्त, २०२० मा AYTM मार्फत अनलाइन गर्यो। यो सर्वेक्षणले १ United++ उमेरका संयुक्त राज्य अमेरिकाका २,००० बासिन्दाहरूलाई समेट्छ। उमेर, लि gender्ग, र यु एस क्षेत्र मा यु.एस. जनसंख्या मिल्दो उमेर र लि gender्ग जनगणना सन्तुलित थिए।
महामारीको बखत कसरी एक चिकित्सक पत्ता लगाउने
चिंता स्क्रीनिंग उपकरणहरू, आत्म-परीक्षण, र बिरामी स्वास्थ्य प्रश्नावलीहरू
मध्यम चिन्ता बनाम गम्भीर चिन्ता
चिन्ता सहायता समूह खोज्नुहोस्
पेरिमेनोपज के हो?
खमीर संक्रमण को लागी स्याउ साइडर सिरका braggs
तपाइँलाई फ्याँक्न रोक्न औषधि
म किन हरेक रात पसीना मा भिजेको छु
तपाइँ toenail कवक को लागी के गर्नुहुन्छ
बीमा बिना स्वास्थ्य सेवा को लागी कहाँ जाने